ရထားတွင်နယ်လှည့်သည် Backpacking သိကောင်းစရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ရထားတွင်နယ်လှည့်သည် Backpacking သိကောင်းစရာများ
ကျောပိုးအိတ်ခရီးထွက်သွားလာရန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, နှင့်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်. သင့်ရဲ့နောက်ကျောပေါ်မှာရှိသမျှကိုသင်၏ဥစ္စာရှိခြင်းနှင့်ရထားကနေရထားနဲ့တိုင်းပြည်တိုင်းပြည်ဖွယ်ရှိနေသည်များ၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အတွေ့အကြုံ. ဒီဒီတော့ပေါ်ပြူလာဖြစ်လာသည်ကတည်းက, ကျွန်ုပ်တို့အချို့ကိုသင်ခရီးသွားလာခပေးလိမ့်မည်ဟုယူဆရထားပေါ်တွင်ခရီးသွားဘို့ ackpacking အကြံပေးချက်များ.
ကျွန်ုပ်တို့သင်တို့သည်ငါတို့၏ပေးမီ go အကြံပြုဘယ်မှာနှင့်အတူစေ၏အစ ရထားပေါ်တွင်ခရီးသွားဘို့ Backpacking အကြံပေးချက်များ.
ခရီးစဉ်အကြံပြုချက် 1: အမ်စတာဒမ်မှလန်ဒန်
ရှည်ကြာခြင်း: 23 ရက်ပေါင်း
အဆိုပါ lineup: ရောမမြို့, Viareggio (Tuscany), ဗင်းနစ်, ဗီယင်နာ, ဘူဒါပက်, Krakow, ပရာ့ဂ်, ဘာလင်, အမ်စတာဒမ်, အသုံး, လန်ဒန်
ခရီးစဉ်အကြံပြုချက် 2: အစ္စတန်ဘူလ်မှလန်ဒန်
ရှည်ကြာခြင်း: 25 ရက်ပေါင်း
အဆိုပါ lineup: လန်ဒန်, ပဲရစ်, Lausanne, Zermatt, Chur, မြူးနစ်, Salzburg, ဗီယင်နာ, ဘူဒါပက်, Sighisoara, Brasov, ဘူခါရက်, Veliko Tarnovo, ဆိုဖီယာ, Plovdiv, အစ္စတန်ဘူလ်
လမ်းကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြထားသည်: Eiffel မျှော်စင်, လူဇင်ဘတ်ဥယျာဉ်, ရေကန်ဂျီနီဗာ, ဆွစ်ဇာလန်အဲလ်ပ်တောင်တန်း, Neuschwanstein ရဲတိုက်, ဒါ့ခ်ရှောချွေးတပ်စခန်း, Buda Castle, အပူဗတ် ဘူဒါပက်အတွက်, အဆိုပါ Black ကဘုရားကျောင်း, အဆိုပါ နန်းတော် ပါလီမန်၏, အဆိုပါသူငယ်တော်ဖွားမြင်၏ဘုရားကျောင်း, အလက်ဇန်းဒါး Nevski ဘုရားကျောင်း, ဂရန်းဇား, စိန့် Sophia.
ဇူးရစ် Lausanne မှရထား
ဂျီနီဗာ Lausanne မှရထား
Lausanne ရထားမှ Bern
Lucerne Lausanne မှရထား
ကျောပိုးအိတ်ခရီးထွက်အကြံပေးချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ 1st ရွေး: Pack ကိုအလင်း!
သင့်ကိုယ်ပိုင်နောက်ကျောအပေါ်အလွန်အကျွံ lugging ၏အတွေးနှစ်သက်ဖွယ်အသံမပါဘူးနေစဉ်, သင်သည်သင်၏ခရီးစဉ်အကြောင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားရတဲ့နေတဲ့အခါကျော် pack ကိုရန်လွယ်ကူမယ့်! ပထမဦးစွာ, ကြောင်း roller အိတ်မှနှုတ်ဆက်နှင့်မဟုတ်ဘဲ သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့ကျောပိုးအိတ်ရ သင့်ရဲ့ခါးပတ်ပတ်လည်ကိုအထောက်အပံ့ပေးဖို့. ထုပ်ပိုးသည့်အခါ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ: ငါ Do ' အမှန် ဒီလိုအပ်ပါတယ်?'' အဖြေကိုအဘယ်သူမျှမဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ဒါဟာနည်းများအနည်းငယ်ခြားနား! သငျသညျအကြိမ်အနည်းငယ်တက်ပြေးနှင့်လှေကားကဆင်းနိုင်ပါတယ်တောင်မှပိုကောင်းပါလျှင် - ဤသင်နှောင်းပိုင်းတွင်ရထားဘို့အပြေးနေလျှင်သင်စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုတစ်ခုအရိပ်အယောင်ပေးကဖမ်းရန်ကို run ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်!
အဖျား 2: အဆိုပါ Make ရထားလမ်းအစီအစဉျ app ကို သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း.
ဒီ app downloads, အားလုံးရထားအချိန်ဇယားသင်၏ဖုန်းပေါ်သို့သင်သည်၎င်းတို့အားအော့ဖ်လိုင်းရယူနှင့်သင့်ကျောပိုးအိတ်ခရီးထွက်အကြံပေးချက်များသည်အရေးကြီးပါသည်နိုင်အောင်! သင်သွားလာရင်းပေါ်မှာဆိုရင်နေချိန်မှာသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်စီစဉ်အသစ်တစ်ခုအတွက်သင်၏အချိန်ခံစားဘို့ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသော, နိုင်ငံခြားရာအရပျ. လည်း, app ကိုသင်သာတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးသင့်ရဲ့ရထားလမ်းရွေးချယ်စရာ filter မှခွင့်ပြု, တစ်ဦးမသင်မနေရကြိုတင်မှာကြားထားစရာမလိုဘဲရထား, ကာစက်ဘီးရထားနှင့်အတူရထား. ကျွန်တော်တစ်ဦးကျောပိုးအိတ်ခရီးထွက်ခရီးစဉ်အပေါ်တစ်ဦးစက်ဘီးယူပြီးအကြံပြုမဟုတ်ဘူးပေမယ့်!
Nuremberg Frankfurt မှရထား
Frankfurt ရထားမှ Bonn
အဖျား 3: စနစ်တကျဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူအလိုအလျောက်ဖွင့်ရောနှောမနေပါနဲ့!
ကျောပိုးအိတ်ခရီးထွက်အကြံပေးချက်များ၏တပြင်လုံးကိုအမှတ်အစာရှောင်သွားလာရန်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ပေါ့ပေါ့တန်တန်, နှင့်ဖြစ်နိုင်ရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ဦးစောင့်ရှောက်မှုမပါဘဲ! သင်တစ်ဦးရထားလမ်း Pass နှင့်ဝယ်ယူတက်အဆုံးသတ်လိုလျှင်, သငျသညျပိုက်ဆံကယ်တင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ရထားလက်လွတ်လျှင်, ဒါကြောင့်စျေးကိုအဆမတန်မြှလာပြီစတင်နိုင်ပါသည်. ဒါကြောင့်, သငျသညျထိုသို့ပြုမှပြုပါနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်အချိန်မျှတသောငွေပမာဏကိုပေးချင်သောအရာကိုတက် whey. ကြိုတင်မဲအတွက်လက်မှတ်များဝယ်ယူ သငျသညျပိုက်ဆံကယ်တင်မည်ပေမယ့်သင့်ရဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကန့်သတ်ပါလိမ့်မယ်.
Nuremberg ရထားမှ Cologne
မြူးနစ် Nuremberg မှရထား
အဖျား 4: နောက်ဆုံးကျောပိုးအိတ်ခရီးထွက်အကြံပေးချက်များ – လက်နီးစပ်သူခြေအိတ်များခြောက်သွေ့ pair တစုံကိုသိမ်းဆည်းထားပါ
အကောင်းဆုံးခရီးသွားကျောပိုးအိတ်ခရီးထွက်အကြံပေးချက်များပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံကနေလာ. အဘယ်အရာကိုမျှစိုစွတ်သောခြေအိတ်နဲ့တူတစ်ရက့်ဝှက်ချက်များကိုပျက်စီးစေ, သင်သည်တာရှည်အကွာအဝေးလမ်းလျှောက်ဖို့လိုအပ်နေနေကြသည်အထူးသဖြင့်လျှင်. ဒဏ်ရာစော်ကားမှုကိုထည့်သွင်းဖို့, သငျသညျအသည်းအသန်သူတို့ကိုမလိုအပ်သည့်အခါဖြစ်ပျက်မှဒုတိယအဆိုးရွားဆုံးအရာပင်ခြေအိတ်ကိုရှာဖွေနိုင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါ! ဒါက Re-ထုပ်ပိုးကိုဖြည်တက်အဆုံးသတ်. အဘယ်သူမျှမလုပ်ဆောင်ရန်လိုလားတစ်ခုခု! နှစ်ဦးစလုံးကးပျော်စရာမဟုတ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အိတ်၏ထိပ်အနီးတစ်အိတ်ကပ်ထဲမှာခြောက်သွေ့တဲ့ pair တစုံကိုစောင့်ရှောက်. ဒါကလမ်း, သင်မှန်သည်ဟုဧရာမရေအိုင်သို့လမ်းလျှောက်ဖို့ဖြစ်ပျက်ကြပါလျှင်, သင့်အဖြေလက်နီးစပ်သူဖြစ်ပါတယ်.
backpacking အခါအကောင်းဆုံးရထားအတွေ့အကြုံကိုရဖို့, စိတ်ကူးစျေးနှုန်းများမှာဘွတ်ကင်ကြေးမပါဘဲ, အသုံး တစ်ဦးကရထား Save, သငျတို့သခရီးသွားလေ့ကျင့်မတိုင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးသွားကျောပိုးအိတ်ခရီးထွက်အကြံပေးချက်များ print ထုတ်ဖို့မမေ့မလြော့ပါ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-backpacking-tips%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#ကျောပိုးအိတ်ခရီးထွက် #BackpackingTips europeantravel europetravel longtrainjourneys ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား ရထားခရီးစဉ်
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား